I-Course kunye neMali yokuHlala - iSikole soLwimi lwaseKhaya, iCambridge
I-Course kunye neMali yokuHlala
Isibonelelo esikhethekileyo-iipesenti ezingama-20 kuzo zonke iifizi zesifundo sikaSeptemba-Disemba 2020
Imirhumo yokufunda epheleleyo engama-2020 (thabatha iipesenti ezingama-20 zokunikela ngentla):
IsiNgesi esinzulu GBP 260 ngeveki Iiyure ze-21 iiyure ngeveki kunye nemisebenzi yoluntu / yenkcubeko. Kubandakanya ukulungiselela ukuhlolwa.
IsiNgesi jikelele GBP 205 ngeveki Iiyure ze-15 iiyure ngeveki kunye nemisebenzi yoluntu / yenkcubeko 4-5 emini.
Ngemva kwexesha lesondlo GBP 80 ngeveki Iiyure ze-6 iiyure ngeveki ngoLwesibili, ngoLwesithathu kunye neLwesine ntambama. Kubandakanya ukulungiselela ukuhlolwa.
Izaphulelo ezongezelelweyo ziyafumaneka kubhaliso olude kwiiKhosi eziBanzi, eziBanzi kunye nezoMva kwemini:
Iiveki ze-4-9 5% isaphulelo
Iiveki ze-10-15 10% isaphulelo
Iiveki ze-16-23 15% isaphulelo
Iiveki ze-24 okanye ngaphezulu 20% isaphulelo
Izifundo zodwa ukuya kweyodwa: I-GBP 55 ngeehora-izaphulelo zithengiswa
Imali yakho yekhosi iquka:
Ukufikelela kwizixhobo zokufunda ngokuzimela
I-Free wif-fi eSikolweni
ISatifikethi kunye nokunika ingxelo kwixesha elizeleyo
Ukulungiselela ukuhlolwa xa kuyimfuneko
Uninzi lwezenzo zentlalo nezenkcubeko
Imali yakho yekhosi ayibandakanyi:
Iincwadi zegrama kunye neencwadi zokuqhuba iimviwo
Iinshurensi yomuntu siqu kunye nohambo
Ukuhamba uye eSikolweni ngebhasi okanye ngebhayisekile
2020 amaxabiso endawo yokuhlala:
YeBhodi yeHlf yokuhlala GBP 170 ngeveki
Iindwendwe zokulala kunye neendwendwe zaseKhabhinethi GBP 140 ngeveki
Ukuzicoca ukutya GBP 130 ngeveki
Akukho ntlawulo yokubhukisha indawo yokuhlala iya kuhlawulelwa uSeptemba-Disemba 2020.
Imirhumo yokungena ayifakiwe kwiimali zokufunda. Kufuneka ufunde iimviwo zeCambridge malunga neenyanga ze-2 phambi komhla wokuhlola.
Imihla yokuHlola kunye neMali ye-2020
Iimviwo zeeMviwo zeeMviwo zokuThengisa
PET Amaxesha e-6 ngonyaka GBP 95
FCE Amaxesha e-6 ngonyaka GBP 151
CAE Amaxesha e-9 ngonyaka GBP 157
CPE Amaxesha e-4 ngonyaka GBP 164
IELTS Ngokuqhelekileyo GBP 185
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe nceda utyelele www.cambridgeopencentre.org kwaye https://ielts.britishcouncil.org/ihlondon
Iveki yokuphumla kunye nohambo
Iindleko: phakathi kwe-£ 22 kunye ne-£ 47 yokuhamba kwelanga elilodwa. Nceda uqhagamshelane neSikolweni ngamanani okuhamba ngeveki.
Sikucebisa ukuba ulungiselele i-inshorensi ukulungiselela unyango, ukulahlekelwa kwezinto zakho kunye nokulahlekelwa kwemirhumo, ukuba ufanele ukhansele ikhosi yakho. Ukuba uvela kwiYurophu yaseYurophu, sinokucebisa ukuba uhambise amaxwebhu afanelekileyo ukuze ufumane unyango lwamahhala lonyango.
Emva kokuba uhlawule isikolo sakho kunye nehafu yesigqeba semali yokuhlawula abantu, unokufuna ukuhlawula iintsuku zentsuku zeveki, ukuhamba okukhethayo, ezinye izinto ezikhethileyo zemini, ukuhamba ukuya kwi-moya, ibhasi okanye ukuqeshwa ngebhayisikili eCambridge. Ungasebenzisa iincwadi zesikolo ngexesha lekhosi, kodwa sinokukucebisa ukuba uthenge nencwadi yesalathisi yegrama xa ulapha. Siyakukucebisa ukuba ungenise ubuncinane i-£ 50 ngeveki.
Ukuba ubhalisa iiveki xa kukho iHholide likaRhulumente uya kufumana isaphulelo kule veki. Azikho iiklasi kule mihla elandelayo kwi-2020:
Isikolo sivalela iiholide zekrisimesi emva kwe-20 ngo-Disemba 2019 kwaye iiklasi ziya kuphinda ziqale ngolwesibini we-7 kaJanuwari 2020.
NgoLwesihlanu 10 Aprili - NgoLwesihlanu oMnandi
NgoMvulo 13 Aprili - ngoMsombuluko wePasika
NgoLwesihlanu i-8 ngoMeyi-ngoMeyi ngoMeyi
NgoMvulo i-25 Meyi-Iholide yeBhanki yeNtsundu
NgoMvulo 31 Agasti - Iholide yeBhanki yeHlabathi
ISikolo sivala ieholide zeKrisimesi kwi-18 Disemba 2020 ukuya kwi-5 uJanuwari 2021.
Ukuba uthatha isigqibo sokuthatha iholide ngexesha lekhosi yakho, nceda usazise kwangaphambili. Ukuba uholide kwiveki ngoMsombuluko-ngoLwesihlanu, asiyi kuhlawulisa iifizi zezifundo zeveki. Ukuba ungekho kwikhaya lakho, kufuneka uhlawule iindleko ezipheleleyo okanye inxenye ukuze ugcine igumbi lakho.